Ady amin’ny asan-dahalo : Apetraka any Bongolava ny BIA faha-2 -
AccueilSongandinaAdy amin’ny asan-dahalo : Apetraka any Bongolava ny BIA faha-2
Ady amin’ny asan-dahalo : Apetraka any Bongolava ny BIA faha-2
19/03/2018 admintriatra Songandina 0
Hiasa manomboka ny faran’ny volana jona ho avy izao ny Vondron-tafika Iraisam-pirenena Faharoa na ny 2eme BIA. Any amin’ny faritr’i Bongolova no hametrahana izany, raha toa ka efa am-perin’asa any amin’ny distrikan’ Ihosy nanomboka ny 06 oktobra 2017 ny BIA voalohany. Ny zoma 16 martsa lasa teo no nametrahana ny Vatofototra hananganana ity Vondron-tafika ity tao Ankazoavo, fokontany Andranomadio, Kaominina Tsiroanomandidy Fihaonana, izay mirefy 06 hekitara. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, dia tafika maherin’ny 300 izay manana fahaiza-manao maha-iraisam-piadiana azy no handrafitra ity Vondron-tafika izay miady amin’ny asan-dahalo ity.”Efa tany amin’ny taona 80 no nisian’ny antso nataon’ireo manam-pahefana sy niandrasan’ny faritry Bongolava amin’ny fametrahana toby toa izao, saingy 30 taona mahery taty aoriana vao notanterahin’ny fitondrana ankehitriny izany”, hoy ny nambaran’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rasolofonirina Béni Xavier.
Tsy hijanona hatreo ny ezaka hataon’ny fitondram-panjakana izay tarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, eo amin’ny lafin’ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana fa mbola hisy ihany koa ny famindrana ny Rezimanta Faharoa ao amin’ny Faritra Miaramila Fahefatra any amin’ny Faritra Melaky. Ankoatra izay, dia eo ihany koa ny fametrahana ny Rezimanta Faharoa ao amin’ny Faritra Miaramila Fahatelo ao amin’ny Faritra Alaotra Mangoro. Natao moa izao lamina stratejika izao mba hahafahan’ny vahoaka tsy ankanavaka misitraka sy miaina ao anatin’ny filaminana, izay tafiditra ao anatin’ny politikam-panjakana. Nahitam-bokany tsara rahateo ny fametrahana sampana miady amin’ny asan-dahalo tahaka izao, satria dia maherin’ny 80 isan-jaton’ ny omby norobain’ny olon-dratsy no efa tafaverina any amin’ny tompony. Natao teo ambany fiahian’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier moa ity lanonana ara-miaramila tamin’ny fametrahana ny vondron-tafika iraisam-pirenena Faharoa ity, ary notronin’ny mpikambana governemanta sy parlemantera maro.